Ciyaartoyga Chelsea Oo Illaa Saqdii Dhexe Ee Xalay Loo Diiday Inay Ka Baxaan Qolka Lebbiska & Sarri Oo Canaan Kala Daalay - Latest football news
Ciyaartoyga Chelsea Oo Illaa Saqdii Dhexe Ee Xalay Loo Diiday Inay Ka Baxaan Qolka Lebbiska & Sarri Oo Canaan Kala Daalay
January 31, 2019 Cabdiwahab Axmed
Ciyaartoyga Chelsea ayaa illaa saqdii dhexe ee xalay aan loo ogolaanin inay ka baxaan qolka labbiska kaddib markii ay guul-darro xanuun badan oo 4-0 ah ay u xambaarisay Bournemouth oo ay marti u ahaayeen.
Guul-darro intan le’eg ayaa waxa ugu dambaysay sannadkii 1996 oo ay Liverpool kaga adkaatay 5-1, waxaana markii ay xalay ciyaartu dhamaatay uu tababare Maurizio Sarri albaabada hoosta uga xidhay ciyaartoyga kooxdiisa oo dhamaystirin, kuwaas oo qolka lebbiska uu ku hayey muddo lagu qiyaasay hal saac.
Ciyaartan oo xilli ku beegnayd 11-kii fiidnimo ee waqtiga UK, ayaa waxa uu tababaruhu go’aansaday in aanu u ogolaanin inay iska baxaan iyagoo aanu khaladkooda u sheegin, sidoo kalena aanay ka arrinsanin sida ay wax yihiin, si gaar ahna aanu mid walba u weydiinin haddii ay jirto wax hoose oo ka qarsoon oo uu tabanayo.
Wariye Chris Wise oo garoonka joogay ayaa sugayay inta ay ciyaartoygu kasoo baxayaan qolka lebbiska, hase yeeshee waxa ku dheeraaday waqtiga, waxaana uu bartiisa Twitterka soo dhigay qoraal xilli dhamaadkii ciyaarta laga joogo 40 daqiiqadood, markaas oo aanu weli dibedda usoo bixin laacibiinta Chelsea.
Chris Wise oo ka tirsan BBC Sports waxa uu sheegay in dhamaan shaqaalihii Chelsea laga soo dareeriyey qolka laakiin ay ku jireen ciyaaryahannada iyo tababare Sarri oo kaliya.
Tababare Maurizio Sarri ayaa hadal dheer oo canaan u badnaa u jeediyey ciyaaryahannada, waxaanu ka dalbaday inay u sheegaan haddii ay jirto wax ay doonayaan oo aanay ka helin dhinaciisa.
Macallinka ayaa warbaahinta u sheegay inuu weydiiyey laacibiintiisa haddii ay isaga wax ka tabanayaan, gaar ahaanna in aanu siinin dhiirigelintii ay u baahnaayeen.
“Way adag tahay in fikir laga helo bandhig ciyaareedkan, sababtoo ah waxay ila ahayd inaanu si fiican u ciyaarnay qaybtii hore. Kaddib waxay naga dhaliyeen gool laba daqiiqo kaddib markii lagu soo laabtay garoonka. Kaddib waxaanu joojinay is-difaacistii waxaananu galnay dhibato.” Sidaas ayuu yidhi Tababare Sarri.
“Waxay ila tahay in aanu dhibaatada xallin doono markii la naga dhaliyey goolka koowaad, waxaananu haysanay 43 daqiiqadood, laakiin falcelintaas maanaan samaynin. Aad ayay u adag tahay in la fahmo sababta.” Ayuu ku daray.
Tababaraha Talyaaniga ah waxa uu intaas kaddib sheegay inuu ciyaartoygiisa kala hadlay waxa ku dhacay, waxaanu yidhi: “Waxaan isku dayey inaan fahmo, waxaanan si degdeg ah ula hadlay ciyaaryahannada kaddib dhamaadkii ciyaarta. Waxa laga yaabaa in aanan awoodin inaan dhiirigeliyo ciyaartoyga, ciyaartana uma arkaynin inay ka muuqato calaamad muujinaysa shaqadaydii, markaa waan niyad-jabsanahay.”
Maurizio Sarri waxa kale oo uu soo qaaday sida ay tahay in ciyaartoygiisu uga jawaabaan guul-darradan iyo qaabka ay tahay in weeraryahannadu u ciyaaraan, waxaanu yidhi: “Waxa jiray ciyaartooyo badan oo goolka kooxda naga soo horjeedda iska ag joogay. Waxa aanu u baahanahay inaanu dhaqdhaqaaq badan samayno marka aanaan kubadda haysanin, haddii kale, weeraryahanka kooxdan dhibaato weyn ayay ku noqonaysaa inuu ciyaaro.”
Si kastaba ha ahaatee, weli waxa aan dibedda usoo bixin jawaabihii ay ciyaaryahannadu siiyeen tababare Sarri iyo in mar kale ay isku fur tuureen Eden Hazard oo khilaaf u dhexeeyo.